Daraasad Cusub Oo Ka War Bixinaysa Wadnaha Iyo Mihiimada Uu U Leeyahay Jidhka - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Daraasad Cusub oo ka War bixinaysa Wadnaha iyo mihiimada uu u leeyahay...
Daraasad Cusub oo ka War bixinaysa Wadnaha iyo mihiimada uu u leeyahay Jidhka
Dhakhaatiir wadnaha ayay su’aalo ku weydiiyay bulsho dhinac Internetka taasi oo ahayd in qofku ogaado caafimaadka wadnihiisa iyo weliba da’da rasmiga ah ee wadnihiisa. Marka ay soo saaraan baadhista waxay qofka siinayeen talooyin caafimaad.
Waxa kale oo daraasadani xidhiidh la lahayd dhererka, da’da, miisaanka, heerka dhiiga iyo dhaqanada khariban ee qofku leeyahay.
Waxa kale oo ku lamaana su’aalo xidhiidh la leh cudurada wadnaha ee qoysku hido u leeyihiin haddii ay jiraan.
Waxaana Dhakhaatiirta hawshan curiyay ayaa siinayay dadka talooyin inay miisaanka dhimaan, xanuunada hayana iska daweeyaan, waxa kale oo ay qofka u sheegayeen xanuunada ku dhici kara haddii aanu in talooyinka ay siiyeen qaadan.
Natiijada barnaamijka ka soo baxday ayaa ah in 78% dadkii ka qeyb qaatay ay ogaadeen in wadnahoodu uu ka da’weyn yahay da’dooda caadiga halka 34% ay ogaadeen in 5 sano wadnahoodu uu ka da’weyn yahay, halka 14% ay ogaadeen in cimrigooda caadiga ah uu wednahoodu ka da’weyn yahay 10-sano. (afriqa-sat.com)
Previous articleWasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed waxay si deg deg ah uga codsanaynaa wasaaradda waxbarashada DF in ardayda aan la geyn xarumaha lagu soo qoray ee Gahey iyo SYL Muqdisho
Next articleFashilka Ganasiga Maxaa Sababa